तिथि मेरो पत्रु » सानो तपाईंको जीवन को प्रेम प्राप्त गर्न तरिका ज्ञात
सानो तपाईंको जीवन को प्रेम प्राप्त गर्न तरिका ज्ञात
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: Mar. 28 2020 |2मिनेट पढ्न
हामी भाग्य मायामा डुब्दै मा एक अभिन्न भूमिका खेल्छ भनेर सबै छवि गर्दा, हाम्रो कार्यहरू कहिलेकाहीं जोर कुरा गर्न सक्नुहुन्छ. तल, हामी तपाईं आफ्नो जीवन को प्रेम प्राप्त गर्न सकिने विभिन्न तरिकामा खोल छन्.
साना ज्ञात बाटो #1: प्रेम लागि तयार हुन
एक सम्बन्ध समय लाग्छ, प्रतिबद्धता, र समस्याका. एक स्वस्थ र सफल सम्बन्ध गर्न प्रमुख पहिले आफैलाई प्रेम गर्न छ, के तपाईं साँच्चै अर्को व्यक्ति प्रेम लागि यो प्रेम अनुमति दिन्छ. बलियो सम्बन्ध, आफैलाई र अरूलाई, भरोसा मा निर्माण गरिन्छ, इमानदारी, र संचार.
साना ज्ञात बाटो #2: थाहा र तपाईंको मानक चिन्न
जबकि यो आफ्नो कमजोरीको द्वारा सम्पूर्ण एक व्यक्ति न्याय अन्याय हो, यो सीमा स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण छ. हामी सबै त्यहाँ केही विचार र व्यवहार आफ्नो सम्बन्ध रोक्न सक्छ कि भनेर. हामी पनि त्यहाँ केही व्यवहार र विशेषताहरु हामी चाहनुहुन्छ र एक सम्बन्धमा आवश्यक छन् भनेर थाह. ती कुरा थाह पाएपछि आफ्नो महत्वपूर्ण अन्य फेला गर्न बाटो मदत गर्नेछ.
साना ज्ञात बाटो #3: एक व्यक्ति मायालु र तिनीहरूको स्नेह मायालु भिन्नता थाहा
केही प्रेममा रहेको धड्किन्छ; तथापि, कहिलेकाहीं यो महसूस हाम्रो साझेदार बारेमा साँचो विचार overpowers. यो तपाईं एक व्यक्तिको कोर गुणहरू र तिनीहरूमा तपाईं आयातित हुनेहरूको बीच भेद गर्न सक्छन् कि ध्यान महत्त्वपूर्ण छ.
साना ज्ञात बाटो #4: मा सही समय ठीक ठाउँमा हुन
त्यहाँ हामीले हाम्रो तत्व हो जस्तो लाग्छ जहाँ केही ठाउँ हुन्. यो साथीहरूसँग खुसी घण्टा मा छ कि छैन भनेर, एक कन्सर्ट वा कला शो मा, वा वर्ग मा, त्यहाँ. तपाईंको व्यक्तित्व चमक हुनेछ, तपाईं मानिसहरूलाई चित्रकला.
साना ज्ञात बाटो #5: शारीरिक सम्बन्धले अघि भावनात्मक सम्बन्धले लागि प्रयास
फेला “आफ्नो जीवनको प्रेम”, एक भावनात्मक बन्धन महत्वपूर्ण छ. जबकि शारीरिक सम्बन्धले मा भागने छैन आवश्यक खराब कुरा हो, यो एक भावनात्मक बन्धन गाह्रो नेभिगेट बनाउन सक्नुहुन्छ.
साना ज्ञात बाटो #6: आफूलाई विश्वास
आफ्नो पेट सुन्न, सहज हुन आफ्नो समय, र आफ्नो न्याय मा रोगी हुन. त्यहि समयमा, यो प्रेम मा नयाँ विचार र धारणा लागि खुला रहने महत्त्वपूर्ण छ.
यसको भाग्य या नगर्ने, यी साना ज्ञात तरिका, वा दुवै – यो महत्त्वपूर्ण छ साँचो प्रेम मा दिन कहिल्यै सम्म. तपाईं यसलाई एकपटक लागि, यो संसारमा सबै भन्दा इनामदायी भावना छ.
10 बिल्ली गर्लफ्रेंड्स श्रेष्ठ हुनुहुन्छ किन कारणहरू
सफल महिला वास्तवमा यो सबै सक्नुहुन्छ?
तपाईं आफ्नो केटा परिवर्तन गर्ने कोसिस गर्नु हुँदैन किन
ट्विटर प्रेम बारे मा के तपाईं के सिक्न सक्छौं??